एनआरएनए « Janata Samachar
नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा ज्ञापनपत्र दर्ता भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाका पदाधिकारीले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै संयुक्त
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले टेलिफोन हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।गैरआवासीय नेपालीले सामना गर्नु परेको समस्यालाई सुनुवाइ गर्ने उद्देश्यले एनआरएनएले आइतबारदेखि टेलिफोन हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो । सङ्घको काठमाडौँस्थित
विदेशी साथी नेपाल भ्रमण गराउनेलाई सम्मान
नेपाल भ्रमण सफल पार्न ‘एक नेपालीले एक विदेशी पठाउ’ अभियान संचालन हुने भएकाे छ ।
निर्वाचनले पन्तलाई दुई वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगद्धारा दिएइको जानकारी अनुसार ९२ प्रतिशत अर्थात २३ सय ४४ मतदान भएको थियो।
एनआरएनएकाे मतदान शुरू, को–को छन् उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
दुवै पक्षले आफ्नो जीत सुनिश्चित रहेको दाबी गरेका छन् ।
एनआरएनएमा दुई पक्षीय भिडन्त, को–को छन् उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
विमानस्थलमा सांसदले डेक्स तोडे, एनआरएनएका प्रतिनिधिले सिसा फोडे
लामो लाइन बस्नुपरेको भन्दै उनीहरुले आइतबार बेलुका डेक्स तोडफोड गरेका हुन् ।
एनआरएनएकाे ९औँ विश्व सम्मेलन मंगलबारदेखि
राजधानीको होटल हायात रिजेन्सीमा हुने सम्मेलन असोज २८ देखि ३० गतेसम्म चल्ने छ ।